श्रीमान को मृ’त्यु: काखमा दुधे बालक छ, लाखौ ऋण पनि, २२ वर्षकै उमेरमा श्रीमती लाई यति पी’डा, यो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला ! – AB Sansar
श्रीमान को मृ’त्यु: काखमा दुधे बालक छ, लाखौ ऋण पनि, २२ वर्षकै उमेरमा श्रीमती लाई यति पी’डा, यो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला !
October 21, 2020 adminLeaveaComment on श्रीमान को मृ’त्यु: काखमा दुधे बालक छ, लाखौ ऋण पनि, २२ वर्षकै उमेरमा श्रीमती लाई यति पी’डा, यो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला !
झापामा भर्खरै मनै छुने खालको दु:खद घ टना घटेको छ । सानै उमेरमा एकजना २२ बर्से युवतीले आफ्नो २६ बर्शिय श्रीमान गु’माएकी छिन । काखमा दुधे बालक समेत रहेको छ । दुधे बालक सहित सानै उमेरमा ऋणको भारी बोक्न बाध्य ती युवती रुदै मिडियामा आएकी छिन । सवारी दु’र्घ:ट’नामा परेर ज्या’न गु’मा’एका उनका श्रीमानकै कमाइले घर चलाउदै गरेको बताउने युवतीका आँखा हरेक पल रसाइरहन्छ ।
साना बच्चाले बाबा खै बाबा खै भनेर बाबालाई खोजिरहदा खाटो बसेको घाउ फेरि बल्झिने बताउदै डाको छोडिन । नका श्रीमान र ससुरा काम गर्न जाने क्रममा दु’र्घ’ट’नामा परेर बिर्तामोडको बि एन्ड सि हस्पिटलमा उपचारका क्रममा छोराको मृ’त्यु भएको र बाबुको अहिले उपचार भइरहेको छ । अर्काको जमिनमा भाडामा बस्दै गरेको परिवार चलाउन मज्दुरी गरेर छाक टार्ने अवस्थामा अर्को ब’ज्र’पा’त परेपछी झनै बिचल्लीमा परेको छ ।
सबैले सकेको सहयोग गर्न अपिल समेत गरेकि छिन । बाबुको उपचारमा कति खर्छ लाग्छ भन्ने नै टुङो छैन । लाखौको ऋण भइसकेकोले अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने टुङो नभएको बताउदै डाको छोडेर रुदै यस्तोसम्म सुनाएकी चेलीको बे’दना हेर्दा कस्को मन रुदैन होला ।
रा’ती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले क’ल्पना पनि ग’रिकी थिनन् यस्तो होला भन्ने !
मेलम्चीमा देखिएका यी ब्याक्ति जसलाई भगवान भन्दै रुन थालेपछि आखिर को हुन् यी ब्याक्ति ?
June 20, 2021 June 20, 2021 santosh
वाग्मती किनारमै जलाउन थालियो कोरोना संक्रमितको श`व
May 3, 2021 Ab-संसार
यी पा’पीहरु जसले भक्तपुरमा गाडी कुरिरहेकी बालिकालाई काभ्रे लगेर ब’ला’त्का’र गरे